नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. खतिवडाद्वारा पदभार ग्रहण | ईमाउण्टेन समाचार
फागुन १४, २०७४ पढ्न ३ मिनेट
काठमाडौं, १४ फागुन । नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सोमबार अपरान्ह पदभार ग्रहण गरेका छन् । राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट सपथ लिएलगत्तै उनले सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा पुगेर पदभार ग्रहण गरेका हुन् ।
पदभार ग्रहण गरे लगत्तै उनले संचारकर्मीमाझ अर्थमन्त्रीको रुपमा नागरिकको अर्थसम्बन्धि मौलिक हकलाई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
नवनियुक्त अर्थमन्त्री खतिवडाले संविधानले निर्देश गरे अनुसारको अर्थतन्त्र निर्माणमा लाग्नुपर्ने आफ्नो दायित्व रहेको स्पष्ट पारे । उनले वित्तिय अनुशासनहिनताको अन्त्य गर्ने घोषणा समेत गरेका छन् । अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुसार वाम गठबन्धनले तयार पारेको चुनावी घोषणा पत्रलाई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जाहेर गरे ।
नवनियुक्त अर्थमन्त्री खतिवडा विकास र मौद्रिक नीतिका विज्ञ हुन् । उनले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष र नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरको भूमिका कुशलतापूर्वक निर्वाह गरिसकेका छन् ।
ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारमा पनि नवनियुक्त अर्थमन्त्री खतिवडाले आर्थिक नीति निर्माणमा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरेका थिए । अर्थमन्त्रीको रुपमा लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा अनुसार अघि बढ्ने उनको योजना छ ।
अभियुक्त रेशम चौधरीले दिए अदालतसामु बयान
नवनियुक्त गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले गरे पदभार ग्रहण
धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष हमालद्वारा पदभार ग्रहण
नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले गरे पदभार ग्रहण
प्रधानन्यायाधीश मिश्रद्वारा सपथसँगै पदभार ग्रहण
नवनियुक्त मुख्यमन्त्री भीम आचार्यद्वारा पदभार ग्रहण